Apple wuxuu bilaabay beta-kii ugu horreeyay ee tvOS 11.4.1 iyo watchOS 4.3.2 | Wararka IPhone
Apple wuxuu sii daayaa beta-kii ugu horreeyay ee tvOS 11.4.1 iyo watchOS 4.3.2
Ragga ka socda Cupertino waxay mar labaad bilaabeen mashiinada beta, saacado yarna waa beta ugu horreeya ee macruufka 11.4.1 waa la heli karaa, hadda, horumariyeyaasha kaliya. Beta-kani ugu horreeyay ee cusbooneysiinta macruufka ee soo socda, wuxuu imaanayaa maalin kadib markii la sii daayay nooca ugu dambeeya ee iOS 11.4.
macruufka 11.4 hagaajin cayayaanka kala duwan ka sokow ku dar AirPlay 2 iyo taageerada fariimaha iCloud. Laakiin ma ahayn beta-ka kaliya ee Apple bilaabay, maaddaama ay sidoo kale gelisay betaskii ugu horreeyay iyo tvOS 11.4.1 iyo watchOS 4.3.2 gacanta kuwa soo-saareyaasha ah. Waqtigan xaadirka ah, wali wax kama naqaano Macs-ka.
Faahfaahinta beta-kii ugu horreeyay ee tvOS 11.4.1, Apple ma bixiyo macluumaad Wixii ku saabsan cusbooneysiinta cusbooneysiintan, laakiin inay tahay cusbooneysiin yar, waxay diiradda saari doontaa hagaajinta cayayaanka aan weli lagu xallin sii deynta tvOS 11.4. Haddii aad tahay horumariye laakiin aadan weli go'aansan inaad rakibto shahaadada, waa inaad ogaataa inaad u baahan tahay inaad ku xirto Apple TV-ga Mac-ga isla markaana aad u sii mariso shirkadda 'Xcode' shahaadada Apple TV, oo ah shahaado mas'uul ka ah soo degsashada. tvOS soo socda 11.X betas
Sida macruufka iyo tvOS, Apple sidoo kale waxay isticmaashay shalay galab inay soosaarto beta cusub oo ah watchOS, gaar ahaan watchOS 4.3.2, hal maalin ka dib markii la sii daayay nooca ugu dambeeya ee watchOS 4.3.1. Beta-kan waxaa heli kara oo keliya kuwa soo-saareyaasha ah, oo hadda, qorshooyinka Apple kuma jiraan inay ku bixiyaan barnaamijka beta-ka ee dadweynaha. Sababta ayaa ah wax kale oo aan ahayn kakanaanta marka dib loo soo celinayo qalabka haddii wax qaldamaan, maaddaama sida kaliya ee lagu sameyn karaa ay tahay iyada oo loo marayo Apple Store rasmi ah. Faahfaahinta cusbooneysiintan, Apple nama siinayo macluumaad ka badan inta cayayaanka caadiga ah iyo hagaajinta waxqabadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Apple wuxuu sii daayaa beta-kii ugu horreeyay ee tvOS 11.4.1 iyo watchOS 4.3.2
Pokémon Quest, waa ciyaarta cusub ee Nintendo ee ay dhiirrigelisay adduunka Pokémon
Falanqaynta Giraanta Sawirka Albaabka 2, isgaarsiin fiidiyoow ah si isha loogu hayo cidda guriga imaaneysa